Articles Archives - Akhbaaraha Iskuulka ee Hada: News News School
Luulyo 2021 Walaashey Cute dhalasho wacan xigashooyin iyo farriimo iyaga ku jiidaya
Filed in Message, quote by Tifaftirayaasha TMLT on July 23, 2021
Farxadda Dhalashada Farxadda Walaasheed: Walaashaa waxay noqon kartaa sida saaxiibkaa ugu fiican, wehelkaaga ugu fiican oo aabbe u noqon karto. Sidaa darteed, haddii aad leedahay walaasheed ama dumaashid oo ay tahay dhalashadeedii, waa inaad u rajeysaa iyada xigasho iyo farriimo walaasheed dhalasho farxad leh oo ku saabsan xigashooyin iyo farriimo si ay uga yaabiso. Walaasheed oo leh…
Barnaamijyada ugu fiican ee gabar saaxiibtinimo ah 2021 ee qalabka Android iyo iOS
Filed in Articles by TMLTStaff on July 22, 2021
Gabar Saaxiibtinimo ah (Virtual Girlfriend App) - Waan helaa, mararka qaarkood waan caajisaan mana jirto cid aan la hadlo, oo aan ku kalsoonahay, waa dareen xanuun badan. Haddii aad caajis tahay oo aad cidlo tahay oo aad u baahan tahay wehel, wax dhib ah ma leh, waxaan ku tusi doonaa barnaamijka la heli karo si aad saaxiib u yeelato oo aad ugu xirnaato […]
Eeg Inta Qiimahoodu Ku Yaal Yahay Isbaanishka Shisheeye 2021
Filed in Shuruudaha Ogolaanshaha, Articles, waxbarashada by TMLTStaff on July 22, 2021
Adiga oo ah arday kufilan Spain, waa inaad ogaataa Qiimaha Waxbarshada ee Spain kahor intaadan xirxirin boorsooyinkaaga dhulka dagaalka lo'da iyo matadorada. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku baran karto Isbaanishka, dhammaantoodna waa xaqiiqo inaad xiiso ka hesho qalbigaaga dhexdiisa. Faahfaahin dheeraad ah ka akhriso hoosta. Kharashka waxbarashada […]
Sida Loo Noqdo Soonka Anorexic (Sababaha, Daaweynta & Calaamadaha)
Filed in Articles by Tifaftirayaasha TMLT on July 22, 2021
Sida Loo Noqdo Qofka Suuxdaysan: Noqo noqoshada waa qof wax ku dhici kara qof walbana waxaan kugula talineynaa inta aad isku dayeyso inaad dib u soo ceshato kalsoonidaada naftaada adoo miisaanka qaar dhimaya, u fiirso inaadan noqon Anorexic. Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato sida loo sumoobo waqti gaaban, sababaha, calaamadaha, iyo […]
Maxay fariimahaygu Cagaar ugu yihiin iPhone-kayga iyo sida loo hagaajiyo
Maxay Farriimahaygu Cagaar u Yihiin?: Maxay Farriimahayga Qoraalku Cagaar ugu noqdeen Fariimahaaga qoraalka ah waxaa laguu soo diri doonaa ama laguugu soo diri doonaa buluug haddii aad isticmaaleyso tikniyoolajiyadda iMessage ee Apple. Fariimahaaga qoraalka waxay kujiraan cagaar hadii aad isticmaaleyso Adeeg Fariin Gaaban ama SMS (dariiqii hore). Fariinta xayeysiinta ah ee ku socota barnaamijka fariinta ee iPhone […]
Khidmadaha Codsiga Visa UK 2021 Qiimaha iyo Shuruudaha
Filed in Articles, safarka by TMLTStaff on July 21, 2021
Boqortooyada Ingiriiska (Boqortooyada Midowday) waa meel ay jecel yihiin in badan oo reer Nigeria ah. Laakiin waa imisa khidmadaha fiisaha UK? Maxay yihiin khidmadaha fiisaha Boqortooyada Ingiriiska ee Nigeria? Maqaalkan, waxaan kaaga sheegi doonaa khidmadaha fiisooyinka ee ugu dambeeyay ee Boqortooyada Ingiriiska, iyo sidoo kale meelaha aad macluumaad dheeraad ah ka heli karto […]
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) Imtixaanka Khadka Tooska ah ee 2021 ee Diyaarinta
Filed in Articles by Tifaftirayaasha TMLT on July 20, 2021
Imtixaanka MMPI ee khadka tooska ah: Imtixaanka MMPI ee khadka tooska ah ee 2021 waa tijaabo muhiim ah oo muujinaysa khibrad iyo is-wacyigelin qof kasta oo doonaya jago muhiim ah shirkadaha iyo ururada sare. Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharaxayaa imtixaanka MMPI, wuxuu sheegayaa muhiimadiisa, wuxuuna bixinayaa hage buuxa oo ku saabsan sida looga gudbo imtixaankan. Waqtigan xaadirka ah, Tilmaamaha Waxsoosaarka Shakhsiyeedka ee Multiphasic ee gobolka Minnesota [Minnesota]
Meetme.com Saxiix 2021 Tilmaame Abuur Koontada oo laga helo www.meetme.com Portal
Filed in Articles by Shaqaalaha tifaftirka on July 20, 2021	• 0 Comments
Meetme.com Saxiix 2021 - MeetMe waa barnaamij shabakad bulsheed kaa caawinaya inaad la kulanto asxaab, saaxiibo sameyso, sheekeysato, shukaansato… laga yaabee inaad xitaa taariikh ka hesho khadka tooska ah! laakiin ujeedada qoraalkan ayaa ah in laga caawiyo isticmaaleyaasha cusub iyo in lagu hago dadka isticmaala ee jira sida loola kulmo dadka. Diiwaangelinta Kulan ama Saxiix Meetme waa […]
Shaqooyinka ugu sareeya ee Online-ka ee Nigeria ee loogu talagalay ardayda iyo kuwa iskaa wax u qabso ee 2021 Fiiri Cusboonaysiinta
Filed in Articles, Education, Job, Samee Money Online by Shaqaalaha tifaftirka on July 20, 2021	• 0 Comments
Shaqooyinka ugu sareeya ee 10 ee ka socda Nigeria: Haddii aad tahay arday ama weriye xor ah, waxaad xaqiiqdii ka fakartay macne aad lacag uga sameysato dhinaca inta aad ka gudaneyso waajibaadkaaga kale iyo xitaa in ka sii badan, siyaabo lacag looga helo raaxada internetkaaga- aaladaha guriga ka shaqeeya Waqtiyada ugu badan ee laga shaqeeyo internetka waxa [
10 Goobood oo Taxane TV ah oo Bilaash ah oo laga Soo Degsado Telefoonada Gacanta
Filed in Articles, Entertainment by TMLTStaff on July 20, 2021
Goobaha Taxanaha Tiifiiga ee Bilaashka ah ee Telefoonada Gacanta: Miyaad ka fikirtay sida caajisnimada noloshani u ahaan doonto filim la'aan? Xitaa ma doonayo inaan qiyaaso in aan la kulmayo xaaladan oo kale maxaa yeelay filimada sifiican ayey u hayaan. Waad ku raaxeysan doontaa, oo sidoo kale waxaad heli doontaa macluumaad ku habboon. Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa kan ugu sarreeya […]
Talooyin lagu hagaajinayo Xirfadaha Xisaabtaada
www.immigration.gov.ng/recruitment Foomka 2021 Cusbooneysiinta Xariirka
Natiijada www.nouonline.net: Natiijada Hubinta Natiijada Jaamacadda Qaranka ee 2021
Julaay 2021 Soojiidashada Rabitaan Subax Wanaagsan iyo Qoraal laad laad Bilaab Maalintaada
Bogga Foomka Codsiga ee Shaqaalaynta Bangiga Caadiga ah ee loo yaqaan 'Chartered Bank' 2021/2022
Xariirka Shaqaalaynta Bangiga Standard Chartered Nigeria 2021 www.sc.com
Qormooyinka Codsi-qorista Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay 2021/2022 Xariirka Foomka Codsiga
Xariirka Shaqada ee Qaramada Midoobay ee Cuntada Adduunka 2021 www1.wfp.org
Dibloomada Dowlada Kolombiya & Shahaadooyinka PhD 2021/2022 Cusbooneysiin
Deeqda waxbarasho ee Vanier Canada Graduate 2021 ee ardayda jaamacadeed
Shahaadada Sare ee Heer Sare ee Caalamiga ah ee Jaamacadda Exeter 2021
Jeff Bezos Miyuu Kujiraa Haatan Haatan? laga bilaabo Amazon ilaa NASA
Hadda Codso Qorista Qorista ee ExxonMobil 2021 Cusboonaysiinta
Julaay 2021 Dhalashooyinka Dhalashada Jecel, Farriimaha iyo xigashooyinka
Qorista ExxonMobil 2021/2022 Hubi Cusboonaysiinta Qaadashada Codsiga
Qorista ExxonMobil Nigeria 2021/2022 Cusbooneysiinta Codsiyada Ugu Dambeeya
Xariirka Shaqaalaynta Qalin-jabinta ExxonMobil 2021 www.corporate.exxonmobil.com
Cusboonaysiinta Qorista Booliska Nigeria 2021 Cusboonaysiinta Shaqooyinka
Qorista DPR www.dpr.gov.ng 2021/2022 Xariirka Foomka Codsiga